Tsvaga iyo Natural Park yeDunas de Liencres | Kufamba Nhau
El Dunas de Liencres Natural Park inzvimbo yepanyama iri muCantabria, munzvimbo yemahombekombe erudyi erwizi Pas. Kana iwe uchizoshanyira iyi nharaunda, iwe unogona kunge uchitsvaga kwete chete kuti maguta amire mukati asiwo nenzvimbo dzakanaka dzepanyama. Cantabria inotipa zvakawanda zvinokwezva, kubva kuAltamira Cave kusvika kumaguta akaita seSantander kana Castro Urdiales. Uye zvakare, inotipa yakachengetedzwa nzvimbo dzechisikigo dzerunako rukuru senge Dunas de Liencres Natural Park.
Este Natural park yakaziviswa mumakore makumi masere, kuva nzvimbo yakachengetedzwa muCantabria. Tiri kuenda kunoona zvatingaone mune ino yakanaka Natural Park yeDunes yeLiencres. Iyi nharaunda iri mutaundi rePiélagos pamuromo perwizi uye inotipa mahombekombe akati wandei.
1 Nhoroondo yeLiencres Dunes Natural Park
2 Nzvimbo dzebasa
3 Natural Park
Nhoroondo yeLiencres Dunes Natural Park
Iyi nzvimbo yakasikwa yakanzi yakachengetedzwa paki yakasikwa muna Zvita 1986. Chakaratidza kuti nzvimbo iyi yakaziviswa nzvimbo yakachengetedzwa yaive dune system yayo. Izvo zvaive zvakare zvaisanganisira mu Network yeDzivirirwa Nzvimbo Dzakasikwa dzeCantabria. Muna 2004 yakabatanawo nenzvimbo dzeNharaunda Kukosha kwenzvimbo yeAtlantic biogeographic. Inosanganisira iyo paka yese uye inosvika kune chiteshi chePas.
Kana tichizoshanyira paki iyi yechisikigo tinogona kuwana masevhisi akasiyana anogona kubatsira zvakanyanya kana zvasvika pakuona nzvimbo. Santander airport iri pasi pemakiromita zana uye chiteshi chechitima chiri padyo neMogro, iri pasi pemakiromita makumi mashanu kubva ipapo. Mutaundi rePiélagos kunewo tekisi nemabhazi emabhazi. Munzvimbo dzakapoteredzwa mune pekugara dzakasiyana uye nenzvimbo dzekupaka mota padhuze nesango remupaini uye nemadunduru, saka izano rakanaka kuenda nemotokari. Munzvimbo iyi mune nzira dzakasaina uye zvakare anodudzira mapaneru. Iyo inzvimbo yakakodzera yemhuri uye inowanzo kuve nzvimbo yakanyarara isina kuwanda kwakanyanya. Iwe unongofanirwa kungwarira kuchengetedza nzvimbo yacho usingakanganwe kuti inzvimbo yakachengetedzwa.
Munzvimbo yepaki yepanyama unogona kunakidzwa nenzvimbo dzinoverengeka. Unogona kupaka mota yako munzvimbo iri padhuze nesango repine. Panzvimbo ino pane nzira diki inotungamira kumatunduru uye kumahombekombe. Kune nzvimbo yepikiniki saka ndiyo nzvimbo yakanaka kana tichida kuzorora nekudya semhuri sezvo paine mamwe matafura. Tinogona kupedza zuva musango repine kana kuenda kunzvimbo yegungwa. Iva sezvazvingaite, inzvimbo inonakidza kwazvo yekufamba kunze kunze munzvimbo yakanyarara. Icho chimwe chezvikamu zvakasikwa zvinogona kunakidzwa zvakasununguka, kugara uchichenjerera kuti usasvibisa kana kukanganisa nzvimbo. Mhuri zhinji dzinofunga kushandisa chikamu chezuva munzvimbo yemusango yemipaini inopa mumvuri nenzvimbo yakanyarara yekudya kana kutozorora.
Kune imwezve nzvimbo yekupaka mota munzvimbo yemahombekombe. Iyi nzvimbo inogona kuve nenzvimbo mangwanani-ngwanani asi sezvo zuva richifamba mumwaka wakakwira inozadza, nekuti mhuri zhinji dzinouya munzvimbo iyi kuzonakidzwa nemabhichi. Kune mahombekombe maviri anogona kushanyirwa. Izvo zve Kanavalle igungwa riri kurudyi uye rinozivikanwa nekuve nemhepo chaizvo uye zvakare kuzvimba. Ino inzvimbo yakajairwa nevashambadziri saka inzvimbo yevatambi vemitambo kunyange isina kukurudzirwa kumhuri nekuda kwemafungu Imwe nzvimbo ine jecha iValdearenas, nzvimbo yejecha rakanakisa regoridhe ine mamwe mafungu. Munzvimbo ino unofanirwa kutsvaga mamwe maooks umo vana vanogona kushamba zvakachengeteka sezvo mvura dzinowanzove nemafungu nguva dzose. Kuti tione nzvimbo yacho pane mafambiro nemumaduru nenzvimbo dzechisikigo kuitira kuti tikwanise kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe.
La dune nzvimbo ine zvikamu zviviri. Chimwe chazvo chikamu chemadhoneti enhare aifamba zvishoma zvishoma mukati. Kuwedzera kwavo kwakamiswa vachishandisa musango wepine wakavagadzika munzvimbo iyoyo. Neiyi nzira, iyo dune inofamba inogona kucherechedzwa zviri nyore uye haina kuendeswa kumberi nekuita kwemhepo, chimwe chinhu chingaite kuti inyangarike nekufamba kwenguva. Kune rimwe divi, iwe une nzvimbo yemadunduru ine zvimwe zvinomera uye izvo zvaramba zvakagadziriswa munzvimbo iri padyo nemahombekombe. Izvo zvinokwanisika kushanyira ese ari maviri uye kazhinji inzvimbo inonakidza kune vadiki. Kubva pamatope pane maonero akanaka enharaunda yegungwa. Maonero epanoramic emahombekombe maviri anotipa nzvimbo yakanaka yekufamba uye kutora mifananidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Liencres Dunes Natural Park